NepalManch :: भारतमा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित ०.५६ प्रतिशत
© 2021 nepalmanch.com
भारतमा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित ०.५६ प्रतिशत
नयाँ दिल्ली । पछिल्लो एक दिनमा भारतमा १९ हजार ५८२ जना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित यस रोगबाट मुक्त भएका परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हाल सक्रिय सङ्क्रमित कूल सङ्क्रमित ०.५६ प्रतिशत मात्र रहेको सोमबार प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार दिएको समाचारअनुसार हाल कोरोनाबाट निको भएकाहरु कूल कोरोना सङ्क्रमितको ९८.१२ प्रतिशत रहेको छ । यसैसँगै भारतमा अहिलेसम्म कोरोनामुक्त सङ्ख्या तीन करोड ३४ लाख ३९ हजार ३३१ पुगेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतमा पछिल्लो एक दिनमा १३ हजार ५९६ जना थप व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको छन् । योसँगै भारतमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन करोड ४० लाख ८० हजार भन्दा बढी पुगेका छन् । भारतमा अहिले सङ्क्रमित अवस्थामै रहेकाको सङ्ख्या भने १ लाख ८९ हजार पुगेको अधिकारीले जनाएका छन् । यो सङ्ख्या २२१ दिन यताको सव भन्दा कम भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
यसैसँगै भारतमा कोरोना शुरु भएयता अहिलेसम्म कुल चार लाख ५२ हजार ९३१ जनाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएका छन् ।
हेलिकप्टर दुर्घटनामा भारतका रक्षा प्रमुख रावतको निधन
कतिमा मुलुकमा फैलियाे काेराेना भाइरसकाे ओमिक्रोन भेरियन्ट ?
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन र रूसी राष्ट्रपति पुटिनबीच भेटवार्ता
हेलिकप्टर दुर्घटनामा भारतीय रक्षा प्रमुख रावतको अवस्था गम्भीर
भारतमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु, ३ जनाको उद्धार
यस्तो छ कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका, कहिले के?
बैतडीका नौ पालिकामा माओवादी केन्द्रको नयाँ नेतृत्व
नेताहरुले सभापतिमा अडान नछाडेपछि रामचन्द्र पौडेलले भने- पार्टीबाटै अलग हुन्छु
लागूऔषध ओसारपसारमा नयाँ शैली : किताबमा खोपा बनाएर ल्याइयो
विचार मिल्नेहरुसँग एकता गर्ने राप्रपाको निर्णय
शिक्षक रानाले १७ महिनाको तलब अझै पाएनन्
निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन संशोधन आवश्यक : मन्त्री झाँक्री
कांग्रेस संस्थापन इतरले आज पनि सकेन साझा उम्मेदवार छान्न
कांग्रेस महाधिवेशन : कुन पदमा उम्मेदवारी दिन्छन् उपसभापति गच्छदार ?
कोइला काट्ने क्रममा घाइते भएका बलराम राईकाे उपचारमा आर्थिक अभाव
८० करोडमा बिक्यो विक्की-कट्रिनाको बिहे भिडियो
ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि भएका दुवै जना संक्रमणमुक्त
© 2021 nepalmanch.com All right reserved